သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပေးပါဦးနော် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပေးပါဦးနော် …
သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပေးပါဦးနော် …
Posted by မမလေး on Oct 20, 2010 in How To.. | 18 comments
. အဲ့ဒါဆိုရင် တစ်ကယ်ပဲ မ၀စေတော့ဘူးလား .
*တစ်ချို့တွေက စားပြီးရင် ၀ မှာစိုးလို့တဲ့ စားပြီးရင် လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီး ပြန်အန်ထုတ်တယ်တဲ့ … အဲ့ဒါဆိုရင် တစ်ကယ်ပဲ မ၀စေတော့ဘူးလား … သိချင်လို့ပါ … သိတဲ့သူ ရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးလို့နော် …
*ဆားဝက်ခြံတွေ နှာခေါင်းမှာ ပေါက်နေတယ် … အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ … ဘာလုပ်ရင် ပျောက်မှာလဲ …
*နဖူးနဲ့ ပါးတွေမှာ အဖု သေးသေးလေးတွေ ခုရက်ပိုင်း နှစ်ရက် သုံးရက် လောက်ပဲရှိသေးတယ် ထွက်လာတာ ဘာလို့လဲ … ဘာလုပ်ရင် ပျောက်မှာလဲ …
*ပါးမှာ အမဲစက် သုံးခုလောက်ထွက်နေလို့ အဲ့ဒါ မှဲ့ခြောက်လား … ဘယ်လိုလုပ်ရင် အမဲစက်ပါးသွားမှာလဲ …
*မျက်လုံးအောက်နားလေးမှာ အဆီကျိတ်လေးတွေပေါက်လာလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ …
*နေပူထဲ သွားလိုက်ရင် ပါးနှစ်ဖက်မှာ အနီ အစက်စက်တွေ ဖြစ်လာတယ် … အဲ့ဒါဘာလို့လဲ …
*လက်က အသားအရေတွေ မညီဘူး … Lotion လိမ်းတာလည်းမရဘူး … ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပြန်ပြီးတူသွားမှာလဲ …
ခုရက်ပိုင်းမှ သိသိသာသာဖြစ်လာတာ သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပေးပါဦးနော် …
ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး မို့မို့မြင့်အောင်ကတော့ စားပြီးသား လက်ထိုးအန်တယ် ပြောတာဘဲ.. အန်တယ် ဆိုတာ ၀မ်းသွားတာနဲ့ မတူဘူး.. ၀မ်းသွားတယ် ဆိုတာ နေ့တိုင်း ဖြစ်နေကျဆိုတော့ သူစနစ်နဲ့ သူ အသားကျနေတာ.. မြစ်ညှာက ရေက မြစ်အောက်ကို စုန်ဆင်းသလိုဘဲ.. သမရိုးကျ.. အန်ထုတ်တယ် ဆိုတာ.. မြစ်အောက်က ရေက မြစ်အထက်ပိုင်းရေပြန်စီး သလိုဖြစ်မနေဘူးလား.. ပိန်မပိန်တော့ မသိဘူး.. ပင်ပန်းမှာတော့ သေချာတယ်။ မတော် အန်ဘတ် ဆို့ပြီး သေသွားရင်ခက်ရချည်ရဲ့..
မျက်နှာကတော့ အရေခွံခွာပြီး အသစ်လဲလိုက်..
တေဇောဆိုတဲ့ အပူတွေ များလို့ ဖြစ်တာနဲ့ တူပါရဲ့.. သောက်နေတဲ့ အဆီကျဆေးတွေက ကယ်လိုရီတွေကို အဆမတန် လောင်ကျွမ်းစေတဲ့ အာနိသင်ရှိရင် အပူတွေ အထပ်ကို ဆန်ပြီး အဖုအပိန့်တွေ ၀က်ခြံတွေ ပေါက်တတ် ပါတယ်။
မိုးရွာနေပေမဲ့ ဆောင်းဝင်သလို အအေးဓါတ်တွေ ရောက်လာတော့ ဥတုရာသီ အပြောင်းအလဲမှာ အပူတွေ ကန်တတ်တယ်။ ဥပမာ မျက်စိနဲ့ မြင်အောင် ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒူရင်းသီး သြဇာသီ မြင်ဘူးတယ် မလား.. အသီးသဘာဝ လုံးချောမွတ်မနေဘဲ အဖုအထစ်တွေ ဖြစ်နေတယ် စားလိုက်ပြီးရင်လည်း အပူတွေ ကန်တယ်။ အသီးမှာ ရှိတဲ့ အဖုအထစ်တွေက အပူဓါတ်တွေ အများကြီး စိုးမိုးမှု ရှိတာကို သက်သေ ပြနေတာဘဲ။ အလုပ်သင့်ဆုံးကတော့ မနက်စောစောထ ရေတ၀သောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးမှ မနက်စာစား.. အပြင်အအေးဓါတ် လွမ်းမိုးချိန်မှာ အတွင်းအပူဓါတ်တွေ အကုန်သေတော့ အပူကန်တဲ့ သဘောပေါ့.. ဆီးဝမ်း မှန်မှန် သွားရင် အပူတွေ ကျပြီး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းလာသလို မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ အဖုတွေ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မျှော်မှန်းသလို ကျန်းမာ ကျစ်လစ် သွယ်လျှတဲ့ ကိုယ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်လာမှာပေါ့ကွယ်။ (အဟမ်း.. မြန်မာ ဆရာလေသံနဲ့)
♥♥♥♥ စားတာနဲ့ ၀တဲ့လူရှိသလို မ၀တဲ့လူလည်းရှိပါတယ် ။ ကိုယ်ကစားတာနဲ့ ၀တဲ့အမျိုးစားထဲပါတယ်ဆိုရင်တော့ ချင့်ချိန်ပြီးစားပါ ။ တခါထဲအ၀မစားပဲ နည်းနည်းကို အကြိမ်အရေတွက် များများစားပေါ့ … လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့အစာကြေလွယ်တယ်လေ ။လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ယူပြီးလုပ်ရင်လည်း ပိန်ပါတယ် … ။ လုပ်ကြည့်ပါ တကယ်သိသာပါတယ်..ဒါပေမဲပထမဆုံး တစ်ပတ်လောက်တော့ လူက ကိုင်ရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အရမ်းပင်ပန်းတယ်။
♥♥♥♥ ဆားဝက်ခြံလေးတွေနှာခေါင်းမှာ ပေါက်တတ်ကြပါတယ် ….။ တစ်ခုသတိထားရမှာက မျက်နှာကိုလက်နဲ့ခဏခဏမကိုင်မိဖို့ပါ ။ လက်က အရာဝထ္ထုတွေကို ထိတွေ့နေရတာများတော့ ပိုးတွေ ကပ်လွယ်လို့ပါ ..၀က်ခြံရှိမယ် ကုတ်ဖဲ့မိမယ်ဆိုရင် မလိုလားအပ်တာတွေဖြစ်လာမှာပါ ..။နှာခေါင်းကပ်တဲ့ ကပ်ခွာလေးတွေရှိပါတယ် ဆိုင်တွေမှာမေးဝယ်ပါ ။ etone ကတော့ အမြဲတမ်းနှာခေါင်းမှာ တစ်ခုခုရှိနေရင် လက်ဆေးပြီးညှစ်ထုတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ် ဆားဝက်ခြံတွေဖြစ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ် ချွေးပေါက်ထဲမှာ ဖုန်လေးတွေနဲ့ အဆီတွေရောပြီးခဲနေရင်ဖြစ်ဖြစ် ဒီအတိုင်းလုပ်နေကြဆိုတော့ အထွေထူးတော့ ပြသနာမရှိခဲ့ဘူး။
♥♥♥♥ အိပ်ရေးပျက်ခဲ့သလား ၊ ရေသောက်နဲခဲ့လား ၊ ၀မ်းချုပ်လားပြန်တွေးပါဦး ။
♥♥♥♥ ပါးမှာအမဲစက်သုံးခုလောက်ထွက်နေရင် တင်းတိတ်ဟုတ်မဟုတ်စစ်စေးကြည့်ပါ။ အမဲစက်က နေလောင်လို့ဖြစ်တာများပါတယ် ။ နေပူထဲမထွက်ခင် sun block ပါးပါးလိမ်းသင့်တယ် ။ ထီဆောင်းသင့်တယ် ။ဒါက မဖြစ်ခင်အခြေနေပါ ။ တကယ်လို့ အမဲစက်တွေဖြစ်၊ နေလောင်ဒဏ်တွေခံရပြီဆိုရင်တော့ မျက်နှာကို မနက်တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ် scrub နဲ့ဆေးပြီး တိုနာလိမ်းသင့်တယ် ။ တစ်ပတ်လောက်ပဲလုပ်ရမှာပါ မဟုတ်ရင်မျက်နှာအရေုပြားတွေပွန်းကုန်နိုင်တယ် ။ ဆိုင်တွေမှာ ချေးချွတ်လို့လည်းရနေပါပြီ… နေလောင်တာက အတွင်းပိုင်းထိရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးခန်းပြပြီးဆရာဝန်အကြံပေးတဲ့စားဆေးလိမ်းဆေးမျိုး အသုံးပြုပါ …။ သိပ်ကြာကြာကြီး မျက်နှာပေါ်မှာ အမဲစက်တွေမထားပါနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကုရင် ပျောက်နိုင်ပါတယ် …။
♥♥♥♥ မျက်လုံးအောက်နားက အဆီတွေစုပြီ အစိလေးတွေဖြစ်လာရင်တော့ ဆေးခန်းပြတာအကောင်းဆုံးပါ ..။
♥♥♥♥ နေပူထဲမသွားခင် အရင်ထီးယူပါ ပြီးတော့ နေလောင်ခံမဲ့ ခရင်မ်တစ်ခုခုသုံးပေါ့… make up base အောက်ခံအနေနဲ့လည်း သုံးရပါတယ် …။ အသားရေမခြောက်အောင် moisture လေးလည်း လိမ်းရင် နေပူလည်း အိုကေနေမှာပါ ။
♥♥♥♥ လက်က အသားရေမညီဘူးဆိုတာ အကျီင်္လက်တိုဝတ်တဲ့ ပခုံး၊ လက်မောင်း ထိပ်တွေဖြူပြီးမညီတာလား ..ဒါက လွယ်တယ် လက်ပြတ်တွေဝတ်ပါများရင် ပြန်ပြီ ညီလာလိမ့်မယ် ..ကိုယ်တွေ့ပါ ။ အစက်ပြောက်တွေထပြီး မညီတာဆိုရင်တော့..အသားမှိုစွဲတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..။ တချို့လူတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ် ..လိမ်းဆေးလိမ်းတာနဲ့ပျောက်ပါတယ် ။
လာပီး ကြီးကြီးလာတယ် နှာခေါင်းတစ်ခုလုံးဂလိုင်အပေါက်တွေချည်းဖြစ်သွားရော.
အင်း ဟုတ်တယ် ချာတူးလန်ပြောသလိုပဲ အမြဲညှစ်ရင်တော့ အပေါက်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့..။ အမြဲမညှစ်ဘူး နှစ်လလောက်မှတစ်ခါကလိတာ ။ တိုနာပြန်လိမ်းတယ် ချွေးပေါက်ကျယ်မှာစိုးလို့ ။
အီးတုံး လေး.. အသဲပုံလေး ဘယ်လို လုပ်လဲ.. သိချင်တယ်.. ပုံထည့်ပုံလေး သိရင်လည်း ပြောပြ
ကြားလိုက်အောင်နားစိုက်ထောင်နော် ……. ALT+3 ပါ ။ left Alt နဲ့မှပဲရမှာနော်
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ☺☻☻☻☻☻☻☻☻☻ သိုင်းကျူး အီးတုံးလေး
မမ အီးတုန်း နှာခေါင်းကို လက်နဲ့လုပ်တော့ ဆားဝက်ခြံတွေက အကြီးကြီးဖြစ်ပြီး မဲသွားတယ်ဆို ဟုတ်လား …
Lotion လိမ်းတာမှ မိုးဟေကိုလိုလိမ်းတာ … မျက်နှာလည်း SPF 36 ++ ပါတာလိမ်းတာပဲ … မရဘူးသိလား … အပြင်ဘက်က မဲပြီး အတွင်းဘက်ကဖြူနေတာ … Lotion လိမ်းတာလည်း မရပါဘူး … အရေပြားဆရာဝန်သွားပြဖူးတယ် … အဆီကျိတ်အတွက်ပေါ့ … သူတို့လည်းဖြစ်တာပါပဲ လို့ပြောတယ် …
ဒီကလေးမလေးတော့နော်… ရေးထားတဲ့ စာတွေကို လိုက်ထောက်ရရင်တော့ တူများတွေ ၀က်ဝက်ကွဲ ရီကုန်တော့မယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်လေးကို ညမျက်နှာသစ်ပြီးရင် လိမ်း ၁၅မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပြိးမှမျက်နှာသစ်လိုက်ရင်သက်သာပါတယ်
မျက်နှာကို သဘာဝသစ်သီးလေးတွေနဲ့ပေါင်းတင်တာကလဲ ကောင်းပါတယ် ကိုယ်တွေ့ပါ
၁.. က Slim Aid ဒါမှမဟုတ်… ဆီးချိုသမားတွေ အစားမစားခင်သောက်တဲ့ Diamin ဆိုတဲ့ ဆေးကို သောက်ပြီးမှ စားပါ… သူက ကယ်လိုရီလျှော့ပေးပါလိမ့်မယ်…
၂.. က လက်မဆော့ပါနဲ့… အချိန်တန်ရင် ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်… သူ့ကို အားပေးတဲ့ ချဉ်ငန်စပ်တွေ လျှော့ပေါ့… Facial Foam သုံးတတ်ရင် Toner လည်း ဆောင်တတ်ရပါမယ်… ပြီးရင် သနပ်ခါးပါ မလိမ်းတာကောင်းတယ်… သနပ်ခါးက ပြီးရင် ဂျီးဖြစ်သွားရော… ချွေးပေါက်က ကျယ်နေတော့ အဲဒီမှာ ၀က်ခြံလမ်းစပေါ့…
၃.. က ညနေလောက်ကတည်းက မန်ကျည်းသီးကို လိုသလောက် ရေစိမ်ထားပေါ့…
ကိုယ်သောက်ချင်သလောက် ရေအဆနဲ့… ထန်းလျက်၊ ဆား လိုသလိုထည့်ပေါ့…
မနက် ၄နာရီ၊ ၅နာရီ လောက် ထသောက်လိုက် ပထမတော့ ၃ ရက်ခြားပေါ့…
၂ခါ၊ ၃ခါ လောက် သောက်ဖူးသွားရင် အပတ်စဉ်ချပေါ့…
အပူများလို့ ဖြစ်တာပါ… ချိန်တော့ သောက်ပေါ့… (ညက သဘောင်္သီးလဲစား ဘာလဲစားဆို ဂိနေမယ်… ၀မ်းအသွားလွန်ပြီး)
၄.. က မှဲ့ခြောက်လား… တင်းတိပ်လား… သိအောင် အရင်လုပ်ပါ… ဖြေပေးပါ့မယ်…
၅.. က Fair & Lovely က သီးသန့် ထပ်ထုတ်ထားတာ ရှိပါတယ်… အလှကုန် ကောင်တာတွေမှာ မေးကြည့်ပါ… ဘူးသေးသေးလေးနဲ့ပါ… ဈေးနည်းနည်းကြီးပါတယ်… မျက်ခွံ အပေါ်နဲ့ အောက်တွေမှာ အဆီစက်လိုဖြစ်တာပါ… မေးပြီး လိမ်းကြည့်ပါ… အိုကေမှာပါ…
၆.. က လေမသန့်တာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်… Allergic ဖြစ်တာနေမှာပါ…
Citrin(May B Wrong Spell) စမ်းသောက်ကြည့်ပါ… Hovid Brand ကတော့ သောက်လေ့သောက်ထရှိပါတယ်… နည်းနည်းတော့ အိပ်ငိုက်တယ်…
၇.. က ဖြူနေတဲ့ ဘက်ကို နေရောင်ဘက်ပြထားလိုက်လေ…
ဦးဦး လူတလုံး အရမ်းသိတာဘဲနော်.. အလှ ဖန်တီးရှင်လား ထင်ရတယ်.. ဟီးဟီး.. နောက်တာ.. ကျေးဇူးပါ နည်းလမ်းလေးတွေ မှတ်သားထားပါတယ်။
ဪ အဲဒါဆို လူတလုံးက နှာခေါင်းမှာ ဆားဝက်ခြံ တွေလည်းရှိတရ် .. နဖူးမှာလည်းဘုတွေနဲ. … မှဲ.ခြောက်ကလည်းပါးမှာရှိပြန် … အသားအရေတွေလည်း မညီဘူးပေါ့နော် ပေါ့နော် ပေါ့နော် ….
အောင်ပု ရဲ့ဆွိဟါ့ထ် ချိုင်းနားဂဲလ်စမောလ်လေး လည်းဒီလိုပါဘဲ
အောင်ပုထက်သုံးနှစ်ငယ်တယ် သူက ဆယ့်ရှစ်နှစ်လေ
ဝက်ခြံဆိုတာက တစ်ချို့ ကိုပြောတာနော် အသက်ငယ်သေးတာနဲ့ လည်းဆိုင်တယ်
ဆေးကတော့ မပြောတတ်ဘူး အထူးဂရုစိုက်ရမှာက (ဆီး၊ဝမ်းမှန်အောင်ပါ သတိပြုပါ)
(တတ်နိုင်သလောက် ရေများများသောက်ပြီး ရှုရှုးများပေါက်ရပါမယ် )
နောက်တာမဟုတ်ဘူးနော် သူတုန်းကလည်း အဲ့ဒါတွေကို ဂရုစိုက်တယ် ခန္ဓာ ကိုယ် အပူချိန်မှန်မှ ဆေးတိုးတယ်
(တစ်နာရီတစ်ခါလောက် ပလုပ်ကျင်းပေး ပြီးရင်မျက်နှာသစ် မျက်နှာသစ်ရင် ဝက်ခြံတွေကို လုံးဝမကလိနဲ့ )
ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ အဲဒါ အောင်ပုမျိုးချစ်တပ်မတော်ထဲမဝင်ခင် ဂျပန်ခေတ်တုန်းကပါ
( ) ကွင်းစကွင်းပိတ်ထည်းက စာကြောင်းတွေကို ဂရုစိုက်နော် အမွေ